Wattpad – Where stories live 8.31.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.31.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား စာအုပ္မ်ား & ရည္ညႊန္းခ်က္ Wattpad – Where stories live
Wattpad – Where stories live ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Wattpad ။ ပုံပြင်များနထေိုငျအဘယ်မှာရှိ။
ကမ္ဘာ့အများဆုံးခစျြတဲ့လူမှုရေးဇာတ်လမ်းပြောပြပလက်ဖောင်းရှာဖွေပါ။ Wattpad ဇာတ်လမ်း၏တန်ခိုးမှတဆင့် 80 သန်းစာဖတ်သူများနှင့်စာရေးဆရာများတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းချိတ်ဆက်။ မူရင်းပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရေးသားခြင်းကိုစတင်ရန်ယနေ့က download လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ပုံပြင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ Get
ပြောပြရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းရှိပါသလား? က Wattpad အပေါ်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်နည်းပညာ၏တန်ခိုးမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ Get ။ Wattpad တခုတခုအပေါ်မှာမူရင်းဇာတ်လမ်း Share နှင့်သင့်အရေးအသားခရီးတစ်လျှောက်လုံးသင်တို့အပေါ်မှာအားပေးစရာရှိပါတယ်တော်မူသောငါတို့၏အသိုင်းအဝုိင်းနှင့်အတူမျှဝေ။ သင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုနောက် Blockbuster ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်ကြသလော Wattpad Studios က Wattpad ပေါ်ထိရသေးသောလက်မှတ်မထိုးနှင့်ပါရမီစာရေးဆရာများတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Multi-မီဒီယာဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကိုဆက်သွယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းစာရေးဆရာများထံမှငါးဆယ်ကျော်ဘာသာစကားများပုံပြင်များရှာဖွေတွေ့ရှိ! သငျသညျစာဖတ်ခြင်း-အချစ်ဇာတ်လမ်း, သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်, နက်နဲသောအရာ, ဟာသ, အက်ရှင်စွန့်စားမှု, စိတ်ကူးယဉ်လူငယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ကူးယဉ်သို့ရောက်နေ, ဒါမှမဟုတ် fanfiction-က Wattpad ပေါ်မှာရှိသမျှင်မည်သို့ပင်။ သငျသညျ Wattpad အပေါ်, သင်ကအားလုံးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ပိုလိင်တူချစ်သူတွေ့ကြံ-ချစ်စရာ, cyberpunk ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ, ဒါမှမဟုတ်ကိုက်စားခြင်းအသစ် technothrillers ရှာဖွေနေ, ဒါကြောင့်အများကြီးပိုပါတယ်ရှိမရှိဒါ။
သငျသညျ Wattpad join အခါ, သငျသညျပုံပြင်-ချစ်သူများတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ အခြားအသည်းအသန်စာဖတ်သူများ & စာရေးဆရာများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါသူတို့ကိုသင်ဖတ်ပါအဖြစ်ပုံပြင်များတွင်တိုက်ရိုက်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ထောက်ခံမှုစာရေးဆရာများသူတို့ဖန်တီးအဖြစ်နှင့်၎င်းတို့၏မူရင်းပုံပြင်များမျှဝေပါ။ သင်ပင်အတူတူဖတ်ပါနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုအစဉ်အမြဲသင်ဖတ်နေအရာကိုသိဒါကြောင့်သင့်စာကြည့်တိုက်ကိုမျှဝေသို့မဟုတ်ဖတ်နေစာရင်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသွားလေရာရာ၌သင်တို့နှင့်အတူရှိသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များသိမ်းဆည်းပါ။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အပေါ်ချိတ်ဆက်? ရိုးရှင်းစွာအသင်လက်ပ်တော့, တက်ဘလက်, Kindle သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်မှာနေဖြစ်စေ, ချွတ် left ရှိရာအလွယ်တကူကောက်ဖို့သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုထပ်တူပြုပါ။
သငျသညျ Netflix နဲ့ပေါ်နမ်း Booth ဖူးပါက, Hulu အပေါ်တစ်ဦး Feather အဖြစ်အလင်းထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ် New York Times ကိုအကောင်းဆုံးရောင်းချသူက Anna Todd ရဲ့စီးရီးပြီးနောက်သင်သိ-သည်ဤမည်မဟုတ်ပါပုံပြင်များပထမဦးဆုံး Wattpad အပေါ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဖတ်ပါ။ ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်း၏လာမယ့်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်တွေ့ရှိရန် scours ပလက်ဖောင်း join နှင့်ယနေ့မနက်ဖြန်ရဲ့ box-office ကိုအာရုံဖတ်နေကိုစတင်ပါ။
ယခုပင်လျှင်တစ် Wattpad ပန်ကာ? သင်အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာများ, ပုံပြင်များ, ပြိုင်ပွဲနှင့်ပိုပြီးအပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့ Instagram ကို, Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ!
Instagram ကို: https://www.instagram.com/wattpad/
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/wattpad/
Wattpad – Where stories live အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Wattpad – Where stories live အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Wattpad – Where stories live အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Wattpad – Where stories live အား အခ်က္ျပပါ
Wattpad – Where stories live ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Wattpad – Where stories live အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.31.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.wattpad.com/privacy
Release date: 2019-09-17 03:53:40
လက်မှတ် SHA1: F2:F6:1A:6C:46:12:C4:AC:DD:ED:A3:E8:F5:3A:1D:CF:E6:F2:AF:B1
အဖွဲ့အစည်း (O): WP Technology Inc.
Wattpad – Where stories live APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ